क्रिकेटलाई ग्ल्यामरको साथ - खेलकुद - साप्ताहिक
क्रिकेटलाई ग्ल्यामरको साथ
धेरैलाई अभिनेत्री रेखा थापाको मुखबाट ‘आई लभ यू’ भनेको सुन्ने इच्छा होला, तर सबै भाग्यमानी हुँदैनन् । यो मामिलामा नेपाली यू–१९ क्रिकेट टिमका खेलाडी भाग्यमानी रहे, किनभने रेखाको मुखबाट उनीहरूले ती तीन शब्द सुन्न पाए । अवसर थियो, युवा विश्वकपमा सहभागी हुने क्रिकेट टिमको सम्मान कार्यक्रम । ‘वि विल राइज फाउन्डेसन’ले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा रेखाका ती शब्दको आशय थियो, नेपाली खेलाडीले युवा विश्वकपमा राम्रो गरून् । यसै साता बंगलादेशमा यू–१९ विश्वकप हुँदैछ । यो विश्व क्रिकेटमा ठूलो महत्त्वको प्रतियोगिता हो । यही प्रतियोगिता खेलेका खेलाडी पछि ठूला स्टार हुन्छन् । यो प्रतियोगितामा नेपालको पनि केही लामो र सफल इतिहास छ । नेपालले विश्व क्रिकेटलाई आश्चर्यमा पारेर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको कुनै इतिहास छ भने यो त्यही प्रतियोगिता हो । यसपल्टको प्रतियोगितामा प्रवेशका लागि पनि नेपाली युवा खेलाडीले छनोटको लामो र कठिन यात्रा तय गरेका थिए ।
प्रश्न उठ्न सक्छ, के यसपल्ट पनि नेपालको प्रदर्शन राम्रो होला ? विश्वास गरौं, यस्तै हुनेछ । वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले भनेका छन्— ‘मेरो इच्छा छ, यो प्रतियोगितामा राम्रो खेलेर आएको हाम्रो टिमको विमालस्थलमा स्वागत गर्ने । मेरा सबै खाले शुभेच्छा र माया यो टिमसँग छ ।’
खासमा यो सम्मान कार्यक्रम आपैंmमा नौलो थियो, एक प्रकारले भिन्न प्रयोग । यो कार्यक्रम थियो, क्रिकेट मात्र होइन, समग्र नेपाली खेलकुद र ग्ल्यामर क्षेत्रबीचको सम्मिश्रण । उक्त कार्यक्रममा चलचित्र क्षेत्रका पुरानादेखि नयाँ हस्ती थिए, गायन र मोडलिङ क्षेत्रका चर्चित नामहरू थिए । उक्त कार्यक्रममा नेपाली खेलकुदको नेतृत्व तहदेखि अरु विधाका खेलाडीहरूसमेत सहभागी थिए । तेक्वान्दो र कराँतेका दुई लेजेन्ड दीपक विष्ट र दीपक श्रेष्ठदेखि पछिल्लो इन्चोन एसियाली खेलकुदमा कांस्य पदक जितेकी विमला तामाङसम्म उक्त कार्यक्रममा उपस्थित थिए ।
उक्त कार्यक्रममा उपस्थित सबैले यू–१९ का खेलाडीदेखि व्यवस्थापन र प्रशिक्षणमा रहेका सबैलाई सम्मान गरेका थिए । सम्मानमा फूलको माला, प्रमाणपत्र र १० हजार रुपैयाँ थियो । कार्यक्रम आयोजकहरूको भनाइ थियो– यो सम्मानको कुनै ठूलो रूप होइन, यो त खेलाडीहरूले बंगलादेशमा राम्रो खेलून् भनेर गरिएको शुभकामना आदान–प्रदानको सानो रूप मात्र हो ।
यस्तोमा नेपाली ग्ल्यामर क्षेत्र मात्र किन पछाडि पथ्र्यो ? मदनकृष्ण श्रेष्ठले पनि सुनेका रहेछन्, भारतमा आमजनता चलचित्र क्षेत्रका नायक–नायिकाको प्रशंसक हुन्छन्, तर तिनै नायक–नायिका भने क्रिकेट र त्यसका खेलाडीका प्रशंसक हुन्छन् । विश्वास नहुन सक्छ, अधिकांश नेपाली कलाकारको प्रिय खेल पनि क्रिकेट नै रहेछ । उदाहरणका लागि विल्सनविक्रम राईलाई लिऊँ, उनले पनि बाल्यकालमा क्रिकेट खेलेका रहेछन्, भलै त्यसको रूप टोले क्रिकेट थियो ।
‘मैले पनि क्रिकेट खेलेको छु, सानोमा । मेरो पनि प्रिय खेल हो, क्रिकेट,’ राईले भने, ‘यो नाताले पनि युवा विश्वकप खेल्न जान लागेको क्रिकेट टिमलाई मेरो धेरै शुभकामना ।’ यसरी शुभकामना दिनेमा राजेशपायल राई, कोमल वली तथा हरिवंश आचार्य पनि थिए । खेलाडीलाई प्रोत्साहनका सबैभन्दा सटिक शब्द भने जितु नेपालको मुखबाट निस्किएको थियो । उनले भनेका थिए– चारैतर्फबाट नराम्रो मात्र सुन्नुपरिरहेको अहिलेको स्थितिमा कम्तीमा क्रिकेट टिमको प्रदर्शनले नेपालीहरूलाई खुसी हुने अवसर प्रदान गरोस् ।
तस्विरहरु: कौशल अधिकारी
मधुशालालाई दर्शकको साथ
एक साथ तीन हास्य सिरियल